Arsenal Oo Guul Ka Gaartay Kooxda Leicester City Xili Uu Maqnaa Aubameyang
Home Falanqeynta Kulamada Arsenal oo guul ka gaartay Kooxda Leicester City Xili uu maqnaa Aubameyang
Arsenal ayaa guul ka gaartay Kooxda Leicester City kulan ka tirsan Horyaalka Premier League Wareegiisa 26-aad oo ku soo dhamaaday 1-3.
Leicester City oo dhaawacyo kaga maqnaayeen xiddigo muhiim ah, ayaa shabaqa Arsenal soo taabatay daqiiqaddii lixaad iyadoo uu Youri Tielemans kubbad uu kasoo boobay Willian iyo Cedric uu hoggaanka ugu dhiibay kooxdiisa.
David Luiz ayaa madax awood badan ku barbarreeyey qaybta hore oo dhamaadkeeda lix daqiiqadood ka hadhsan yihiin ka hor intii aanu Alexandre Lacazette gool u beddelin rikoodhe loo dhigay daqiiqaddii ugu dambaysay qaybta hore iyadoo qeybta hore lagu kala nastay 1-2.
Nicolas Pepe ayaa qaybtii dambe goolka saddexaad u dhaliyey Arsenal, waxaanay ciyaartu kusoo dhamaatay 3-1 ay guushu ku raacday Arsenal.
Arsenal ayaa soo gashay kaalinta sagaalaad ee horyaalka Premier League, laakiin waxa kala wareegi doonta Tottenham haddii ay ka badiso Burnley.
Leicester City ayaa iyaduna iska lumisay fursad ay kaalinta labaad ee horyaalka Premier League ka geli lahayd, iyadoo si buuxdana booskaas u qabsan lahayd haddii United ay guul ka keeni weydo ciyaarta Chelsea.
Kooxda Arsenal ayaa kulanka xiga la ciyaaridoonta Burnley Sabtida soo socota halka Leicester City ay iyana la ciyaaridoonta Burnley Arbaca 3 bishan
Previous articleTababaraha Manchester City Pep Guardiola oo dhigay rikoorkii abid ugu fiicnaa ee Taariikhda Manchester City
Next articleManchester City oo weli aaminsan inay hogaamineyso loolanka loogu jiro Lionel Messi’